Budata Crash Bandicoot Mod ngwa ngwa ngwa ngwa maka gam akporo
October 8, 2021 by Reyan Ahmad
You na -achọ ụzọ dị mfe iji nweta atụmatụ niile dị mma nke egwuregwu egwuregwu ọkacha mmasị gị Crash Bandicoot? Ọ bụrụ ee, mgbe ahụ anyị nọ n'ụdị kachasị mma maka gị, nke ị nwere ike nweta atụmatụ niile n'efu. Download Crash Bandicoot Mod Menu Nbudata iji nweta atụmatụ niile adịchaghị n'efu.
Enwere ọtụtụ egwuregwu dị na ịntanetị, nke ị nwere ike igwu na ngwaọrụ dị iche iche. Ọtụtụ n'ime egwuregwu ndị a na -enye ndị ọrụ ọrụ adịchaghị mkpa, nke chọrọ itinye ego iji nweta. Yabụ, anyị nọ ebe a nwere egwuregwu yiri ya, nke akpọchiri atụmatụ niile adịchaghị.
Kedu ihe bụ Crash Bandicoot Mod Menu?
Crash Bandicoot Mod Menu Apk bụ ngwa egwuregwu mod nke gam akporo, nke na -enye ụdị egwuregwu egwuregwu kacha mma Crash Bandicoot. Moddị mod na -enye ndị egwuregwu ọtụtụ atụmatụ, nke ị nwere ike nweta ebe a wee nwee ọ enjoyụ egwuregwu karịa.
Ọ bụrụ na ị gbara ụdị egwuregwu a, ị mara maka egwuregwu na atụmatụ ya. Egwuregwu a gụnyere ịgba ọsọ n'efu, nke ị nwere ike ịnwe mgwakota agwa dị iche iche wee mee mwakpo megide ihe ọjọọ iji kpokọta ihe bara nnukwu uru.
Yabụ, ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ọrụ igwu egwu n'efu, mana enwerekwa ụfọdụ ọrụ adịchaghị maka ndị ọrụ. Yabụ, ịkwesịrị ịkwalite akaụntụ gị iji kpọghee atụmatụ ndị ahụ niile. Yabụ, anyị nọ n'ụdị egwuregwu a gbanwetụrụ.
na nke a Mbido Nhọrọ, enwere ọtụtụ atụmatụ dị maka ndị egwuregwu. Ịkwesighi itinye ụdị ego ọ bụla ebe a, nke pụtara ịnweta ihe niile adịchaghị mma n'efu. A na -emeghe ihe niile akpọchiri ebe a n'efu, nke ị nwere ike iji mee ka ntọala gị ka mma.
Dịka ị maara na ị ga -aga agwaetiti dị iche iche iji nakọta ola diamond, nke DR Neo ga -ezu ohi. Ndị na -egwu egwuregwu ga -akwalite ntọala ha, site na nke ị nwere ike gbuo ndị mmegide gị n'ụzọ dị mfe ma dozie nsogbu ndị ahụ.
Yabụ, na ụdịdị a, ịkwesighi ichegbu onwe gị maka ọrụ ọ bụla. Ị ga -enweta akụ na -akparaghị ókè, nke ị nwere ike iji kwalite egwuregwu na ntọala gị. Anyị ga -ekerịta ụfọdụ ihe, nke ị nwere ike iji na -enweghị ụdị itinye ego ọ bụla.
Unlimited bara nnukwu uru
Yabụ, ịnwere ike iji atụmatụ ndị a kwalite agwa gị na ntọala gị. Enwere ike ịkpọghe agwa na nka niile site na ngwa a, nke ị nwere ike nweta ma kporie ndụ. Yabụ, ọ bụrụ na unu dị njikere ịnweta ọrụ ndị a niile, budata ha na ngwaọrụ gam akporo gị.
Ọ ga -amasị gị itinye oge efu gị n'elu ikpo okwu ma nwee ọ moreụ karịa. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na usoro nbudata, mgbe ahụ ụmụ nwoke nwere ike ịkpọtụrụ anyị ngwa ngwa. Ị nwere ike iji ngalaba nkọwa dị n'okpuru kpọtụrụ anyị.
Anyị nwekwara ụfọdụ ụdị egwuregwu maka unu niile, nke unu nwekwara ike ịnwale. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ inweta egwuregwu ndị ọzọ yiri ya, nwalee Egwuregwu Squid Royale na Oku nke Gurty.
aha Crash Bandicoot Mod NchNhr
Aha ngwugwu com.king.crash.moddroid
Obere Nkwado achọrọ 5.0 na n'elu
Nseta ihuenyo nke App
Etu esi ebudata Mod Mod?
Ụdị gọọmentị dị na ụlọ ahịa Google Play, mana ịnweghị ike ịchọta ụdị nke emegharịrị. Ma ọ dịghị gị mkpa ichegbu onwe gị maka ya ọzọ. Anyị ga -eso unu niile kerịta ụzọ dị mfe, nke ị ga -esi nweta Apk.
Ịkwesịrị ịchọta bọtịnụ nbudata na ibe a, nke enyere na elu na ala ebe a. Ozugbo ịchọtara bọtịnụ, mgbe ahụ ị ga -eme otu mgbata na ya. Usoro nbudata ga -amalite n'oge na -adịghị anya mgbe emechara mgbata ahụ.
Free ibudata na Jiri
Ntughari kacha mma nke CB
Akpọchighi ihe niile adịchaghị
Ihe bara nnukwu uru na iko
Akpọgheri agwa na akpụkpọ anụ
Mfe ma dị mfe igwu egwu
Ngosipụta dị elu
Egwuregwu Egwuregwu Dị Mfe na Mfe
Gbuo onye mmegide site na iji otu ihe otiti
Anaghị akwado Mgbasa ozi esighi na
Ndị njikwa ngwa ngwa na arụ ọrụ
Interface bụ Onye ọrụ-enyi na enyi
Ọtụtụ Ndị Ọzọ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkpụkpọ CB, mgbe ahụ Crash Bandicoot Mod Menu Android bụ ụdị kacha mma maka gị niile. Site na mod a, ị nwere ike ịnweta atụmatụ niile n'enweghị nsogbu ọ bụla wee nwee ọ enjoyụ na oge efu gị. Yabụ, nweta faịlụ Apk site na njikọ nbudata dị n'okpuru.
Categories Egwuregwu, Action Tags Crash Bandicoot Mod NchNhr, Crash Bandicoot Mod NchNhr ngwa ngwa, Download Crash Bandicoot Mod NchNhr, Mbido Nhọrọ Mail igodo
Budata REC TV Apk Maka gam akporo [Ntụrụndụ efu]
Onye njikwa bọọlụ 2022 Apk Download maka gam akporo [Kacha ọhụrụ]
2021 APKOll.com - All RIghts echekwabara